Chii chinonzi psychologist wemujeri | Kuumbwa uye kudzidza
Chii chinonzi psychologist wemujeri?
Basa repfungwa psychologist rakakosha zvakanyanya munharaunda yanhasi. Nekuda kwebasa ravo, ruzhinji rwematsotsi runokwanisa kugadzirisa uye kusanganisa nzanga. Basa ravo harisi nyore kana kupusa nekuti ivo vanofanirwa kubata nevanhu vakaita imwe mhando yematsotsi inofungidzirwa kunge yakakomba.
Haasi munhu wese akakwana zvakakwana kuti akudziridze urwu rudzi rwebasa sezvo ivo vachizowana zvakashata zvehunhu hwevanhu munyama yavo. Munyaya inotevera tichazotaura newe zvakadzama nezve chii chinonzi psychologist wepfungwa uye nemabasa aachave nawo.
1 Ndeapi mabasa epfungwa wepfungwa
2 Unyanzvi hwepfungwa psychologist
3 Zvinotarisirwa kana uchinyorera chinzvimbo seye psychologist wemujeri
4 Ndezvipi zvinopesana nemurapi wepfungwa?
Ndeapi mabasa epfungwa wepfungwa
Nyanzvi yepfungwa dzepajeri ichaita mabasa ayo munzvimbo mbiri dzakasiyana: imwe iri nyanzvi uye imwe ine kupindira kukuru.
Mukutanga kwavo, chiremba wezvepfungwa anozvipira kuita kuongororwa padanho repfungwa remutadzi, pamusoro pekuita mareport akasiyana siyana aunofanirwa kutumira kudare. Basa remurapi wepfungwa rinova rinonyanya kukosha kana mupomeri achipinda mutirongo. Ikoko iwe unofanirwa kuenderera mberi uchimuongorora kuti azive nguva dzese shanduko yake padanho repfungwa. Iyi yekutevera yakakosha kana mutongi afunga kudzikisa mutongo uye kumupa mamwe mvumo.
Nzvimbo yechipiri ndeyekupindira. Nekuda kweizvi, chiremba wezvepfungwa wemujeri ane simba rekutanga imwe nzira yekurapa inogona kubatsira musungwa kuti apore kubva padambudziko ripi neripi raangave naro, sekumwe kupindwa muropa kana kusagadzikana kwepfungwa. Kurapa kunogona kubatsira munhu akatongerwa kupora kubva padambudziko rake uye nekudaro kuzadzikiswa.
Unyanzvi hwepfungwa psychologist
Nyanzvi yepfungwa dzepajeri ichaita mumasimba anotevera:
Iye ndiye anotarisira kudzidza zvakakwana hunhu hwakasiyana hwematsotsi.
Inobatsirwa nematurusi epfungwa akasiyana, kukubatsira kunyora chirevo zvinoenderana nemamiriro epfungwa dzemunhu akapomerwa.
Iyo zvakare ine basa reanachipangamazano padanho redzidzo uye rebasa remutadzi, kuitira kuti vagone kuita zviitiko zvakasiyana mukati mejeri.
Unogona kuita marapirwo akasiyana kungave wega kana pamwe chete.
Zvinotarisirwa kana uchinyorera chinzvimbo seye psychologist wemujeri
Kana munhu achishuvira kupinda mumakwikwi uye kunyorera imwe yeaya ejeri psychologist chinzvimbo, ivo vanofanirwa kusangana zvakateedzana zvezvinodiwa:
Iwe unofanirwa kuzadza fomu kuwana miedzo inosarudzwa nePublic Administration.
Bhadhara mari inoenderana kukwanisa kuita bvunzo dzakasiyana.
Endesa Bachelor's degree muPsychology.
Haana kuve mutirongo anopfuura makore matatu.
Ndezvipi zvinopesana nemurapi wepfungwa?
Kunyorera imwe yezvinzvimbo zvinopihwa, vanokwikwidza vanofanirwa kupfuura zvikamu zviviri zvakasiyana: imwe ndiyo ongororo uye imwe ndiyo sarudzo. Kunyanya, iyi bvunzo yezvinyorwa uye imwe yakanyanya kutarisisa pane zviitwa. Panyaya yemubvunzo wedzidziso, anenge achinyorera anozofanira kupasa zviitwa zvina zvinowedzera kusvika kugiredhi rekupedzisira.
Kana munhu wacho ari mumwe weavo vakasarudzwa uye achikwanisa kupasa bvunzo, iye anoenderera mberi nekuita zvakateedzana zvezviito zvakakamurwa kuita zvikamu zviviri: kosi yekudzidzira muhunyanzvi wevasungwa uye kudzidziswa mukati mepakati penhare. Kana munhu wacho achikwanisa kukunda chikamu chekupedzisira ichi, ivo vanokwanisa kupinda mutirongo, kunyanya sejeri repfungwa.
Chinhu chekupedzisira kusimbisa mubhadharo kana mubhadharo uyo chiverengero chakadai saiye psychologist wepfungwa achagamuchira. Semutemo wakazara, chinzvimbo ichi chePublic Administration Iwe urikuzogamuchira dzinosvika zviuru zviviri zveeuros pamwedzi pamwe nemari mbiri dzinoshamisa. Chero zvazvingaitika, uku kufungidzira kwakaomarara nekuti muhoro unogona kusiyana zvichienderana neguta reSpain kwaunoshandisa chinzvimbo.
Muchidimbu, wezvepfungwa mutirongo chinzvimbo chisinganyatso kuzivikanwa kunyangwe kukosha kwayo kuchikosha, kunyanya muchiitiko chekuti munhu akapara mhosva anokwanisa kugadzirisa nekudzokerazve munharaunda. Icho chinzvimbo chinoda kunzwira tsitsi uye humwe hunyanzvi hwehukama kana zvasvika pakuwadzana nevanhu vakwanisa kuita rumwe rudzi rwematsotsi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kuumbwa uye kudzidza » Studies » Jobho Kubuda » Chii chinonzi psychologist wemujeri?
Psychology uye parapsychology: Ndeupi mutsauko wavo?
Chii chinonzi paramedic uye anoita mabasa api?